सपथ लिन आउँछु, टीकापुर नरसंहार मैले गरेको प्रमाणित भए जेल जान तयार छु | नेपाल आज
सपथ लिन आउँछु, टीकापुर नरसंहार मैले गरेको प्रमाणित भए जेल जान तयार छु
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ गते प्रकाशित
रेशम चौधरी, प्रतिनिनिधसभामा निर्वाचित उम्मेदवार
टीकापुर नरसंहारको नाइके भनेर मविरुद्ध राज्यले झुठा मुद्धा लगाएको छ । डकैती, चोरीको समेत आरोप ममाथि छ । टीकापुर एक दुर्घटना थियो । गल्ति थियो । तर म के आजसम्म कुनै डकैतीमा सामेल भएको छु ? मैले चोरी गरेको छु ? जनताले ममाथि लगाएको आरोप हो यो । यति हुँदा हुँदै पनि मैले कैलालीबाट चुनाव जितँे । कुनै मतदाताकोमा एक पटक नपुगी नै मैले चुनाव जितेँ । मलाई नै आश्चर्य लागेको छ कि मैले चुनाव कसरी जितेँ भन्ने । तर मलाई जनताले जिताए । उहाँहरुलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
ममाथि राज्यले लगाएको मुद्धा झुठो हो भन्ने जनताले भोटमार्फत अनुमोदन गरेका छन् । टीकापुर नरसंहारका वास्तविक दोषी त राज्यले खोजेकै छैन । जो मानिस आन्दोलनमै थिएनन्, जो मानिस त्यो बेला अन्तै कतै थिए, उनीहरुविरद्ध पनि मुद्धा दर्ता भएको छ । थारु काल्याणकारी सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरी, सभाका कैलाली अध्यक्ष लाहुराम चौधरी, नेता लक्ष्मण चौधरीविरुद्ध पनि मुद्धा दर्ता गरिएको छ । जबकी उनीहरु नरसंहारको बेला त्यहाँ छँदै थिएनन् ।
आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा राखिएको आमसभामा जनता भड्काउने भाषण गरेर यस्तो भएको हो भन्ने हो भने म भन्छु कि त्यस्तो भाषण गर्ने अमरेशकुमार सिंह, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र यादव, रामजनम चौधरी, जनकराज चौधरी, सुरेन्द्र चौधरीलाई समातेर किन कारबाही गरिँदैन ?
त्यो घटनापछि मेरा सम्पत्तिमा आगो लगाइयो । ८ करोड भन्दा बढी क्षति भयो । राज्यले डेढ करोड भन्दा अलिकति बढी क्षतिपूर्ति दियो । बाहिर हल्ला भयो कि रेशम चौधरीको घरको शिशा फुट्दा उसलाई सरकारले पौने दुई करोड क्षतिपूर्ति बाँढ्यो भनेर ।
टीकापुर नरसंहार एक दुर्घटना थियो भनेर मैले माथि नै भनिसकेको छ । यो एक गल्ति थियो भन्ने पनि मान्छु । तर यो राजनीतिक घटना हो । जसरी जनयुद्धमा १७ हजार मानिसको ज्यान गयो, त्यसलाई राज्यले राजनीतिक घटना मान्यो त्यसै गरी यसलाई पनि राजनीतिक घटना मान्नु पर्छ र मेलमिलाप आयोग गठन गरेर मिलाउनु पर्छ ।
भारतमा प्रमसँग भेट
भारत भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि मैले भेटे । उहाँले झुठा मुद्धा फिर्ता लिने आश्वासन दिनु भएको थियो । त्यो भेटमा मैले म निर्दोश छु, नरसंहारमा मेरो संलग्नता छैन भनेको थिएँ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन भन्ने अनि प्रहरी मार्ने, त्यसैलाई राज्यले राजनीतिक मानिदिनु पर्ने ?
४६ सालको जनआन्दोलनमा कालीमाटीमा २२ जना प्रहरीलाई लखेटी लखेटी मारियो । त्यो घटना राजनीतिक हुने । तर यो नहुने कसरी हुन्छ ? तपाईले सोध्नु भयो कि टीकापुरमा जो जो प्रहरी मारिए उनीहरुका परिवारलाई कसरी चित्त बुझाउनु हुन्छ ? यसमा मेरो जवाफ छ कि १७ हजार मानिस पनि मारिए । ती मृतकका परिवारलाई राज्यले कसरी चित्त बुझाएको छ ? त्यो एक उत्तेजित भीडले गरेको कुकर्म थियो । यसमा हाम्रो नियत र पूर्वयोजना केही पनि थिएन । तर दूर्भाग्यपूर्ण घटना भयो ।
तपाईलाई प्रहरीले जहाँ भेट्यो, त्यही गिरफ्तार गर्ने भनेको छ नी ?
मैले पनि यस्तै थाहा पाएको छु । जनताले मलाई चुनावमा जिताए । अब सपथ ग्रहणमा पनि जान्छु । प्रहरीले समायो भने पनि म अदालतमा गएर निर्दाेश रहेको प्रमाणित गरिदिन्छु । प्रहरीले समाउने त होला नी गोली हान्ने त होइन होला । मलाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ भन्ने चिन्ता छैन अब । किनभने यदि मैले प्रहरीको हत्या गरेको प्रमाणित हुन्छ भने जेल जान तयार छु । यो घटनाका कथित आरोपी अहिले पनि २५ जना जेलमा छन् । ४० भन्दा बढी भूमिगत भएका छन् ।
त्यो बेला प्रहरी र बच्चा मारेको सबैले देखे । तर त्यही घटनामा प्रहरीले २ सय ज नालाई गोली हानेर घाइते बनायो । चेलीबेटीमाथि सेना प्रहरीले यौन उत्पिडन गर्यो । त्यो कसैले देखेन । घटना भएको कति दिनसम्म कर्फ्यू लाग्यो । वास्तविकता बाहिर आउनै पाएन । देखाउनकालागि विभिन्न छानविन समिति गठन गरिए । तर वास्तविकता कुनै छानविन समितिले पनि बाहिर ल्याएन ।
(टीकापुर नरसंहारमा सरकारले अभियुक्त मानेको तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कैलाली १ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)